ခရီးမသွားခင် ဖြစ်တတ်တဲ့ စိတ်ပူပန်ခြင်းကို ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ ဖြေရှင်းမလဲ
အောက်ဆီဂျင်ဗူး ရောင်းဝယ်၊ ငှားရမ်းနိုင်သည့်နေရာများ
လူမှုဖူလုံရေး ဆေးရုံနှင့် ဆေးခန်းများ
HIV ဆိုင်ရာ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေး ပညာပေးဆေးခန်းများ
UNITED PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
စိတ်ကျန်းမာရေး ခရီးမသွားခင် ဖြစ်တတ်...
ခရီးမသွားခင် ဖြစ်တတ်တဲ့ စိတ်ပူပန်ခြင်းကို ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ ဖြေရှင်...
လူတော်တော်များများဟာ ခရီးမထွက်ခင်မှာ တူညီတဲ့ခံစားချက်တွေ ရှိကြပါတယ်။ လပေါင်းများစွာ ကြိုတင်ပြီး အစီစဉ်တွေချ၊ မျှော်လင့်ချက်တွေထားပြီး နေလေ့ရှိကြပါတယ်။ တကယ်တမ်း အဲဒီအချိန်လည်း ရောက်လာရော သင့်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် မသေချာ မရေရာတွေဖြစ်ပြီး စိတ်ပူပန်တာတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ပုံမှန်ဖြစ်တတ်တာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ခဏခဏ ခရီးသွားနေကြတဲ့ သူတွေတောင် ဒီလို တစ်ယောက်တည်း ခရီးမသွားခင် (သို့) ခရီးရှည် ထွက်ခါနီး စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို မရှောင်လွှဲနိုင်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် အောက်မှာ ဖော်ပြမယ့် အကြံပေးချက်တွေကို လိုက်နာဖို့ လိုပါတယ်။
၁။ သင့်ကို စိတ်တည်ငြိမ်စေမယ့် စာသားကို ရှာပါ။
တစ်ခါတစ်ရံမှာ သင်လိုအပ်တာက သင့်ကို အာရုံစိုက်နိုင်စေပြီး၊ တည်ငြိမ်အောင် လုပ်ပေးနိုင်မယ့် ထူးခြားတဲ့ စာသားတကြောင်း ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ Matador ဆိုတဲ့ခရီးသွား website တခုက အယ်ဒီတာ Lola Akinmade က သူမရဲ့ တချိန်က ဆောင်းပါးတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံး ခရီးသွားစာသား အခု ၅၀ မှာ “အမှတ်ရစရာ ကောင်းသော ခရီးသွား စာသားတွေဟာ ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာ တွေ့ရတဲ့ စာသားတွေနဲ့ တူပါတယ်၊ တိုက်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာ ဖတ်ကြည့်ရင် အံ့သြစရာ ကောင်းတယ်၊ တည်တံ့တယ်” လို့ ဖော်ပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ သင့်အကြောင်းကို အမှန်တကယ် ဖော်ပြမယ့် စာသားတခုကို ရှာဖွေပြီး ရေးထားပါ။ ပြီးရင် သင့်မှတ်စုစာအုပ်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ နေ့စဉ်မှတ်တမ်းမှာဖြစ်ဖြစ် မှတ်ထားသင့်ပါတယ်။ သင်စာအုပ် ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါတိုင်း သင်ဘာကြောင့် ခရီးသွားတယ် ဆိုတာကို မှတ်မိနေစေမှာပါ။
၂။ ခရီးသွား ဘလော့ဂ်များကို ဖတ်ပါ။
တကယ်ကောင်းတဲ့ ခရီးသွားဘလော့ဂ်တွေဟာ သင့်ကို အချက်အလက်နဲ့ အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေတင် မဟုတ်ဘဲ တခြားသူတွေရဲ့ ရှုထောင့်တွေကိုပါ သိရတဲ့အတွက် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်။ သူများတွေလည်း သင်နဲ့အလားတူ ခံစားချက်တွေ အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်း ရရှိစေနိုင်ပါသေးတယ်။
၃။ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုတွေ၊ အရေးပေါ် ဖုန်းနံပါတ်များ၊ မေးလ်များနဲ့ အခွန်ဆောင်ဖို့ကို ပြင်ဆင်ထားပါ။
ဒီအပိုင်းဟာ လူအများစု မလုပ်ချင်တဲ့အပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ သင်ဟာ ခရီးထွက်တော့မယ် ဆိုရင် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားတာဟာ သင့်အတွက် စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့နည်းစေမှာပါ။ သင့်ခရီးစဉ်အတွင်း ကျန်းမာရေး အရေးပေါ် အခြေအနေတွေ အတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ အလားတူ ကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့ အခွန်ဆောင်တာ၊ မေးလ်ပို့တာနဲ့ တခြား စာရွက်စာတမ်း ကိစ္စတွေက အိမ်မှာ လုပ်ရတာထက် ခရီးသွားနေတုန်း လုပ်ရရင် စိတ်ဖိစီးမှု ပိုများစေပါတယ်။ ကိုယ် ဘာကို စိုးရိမ်လို့ စိုးရိမ်နေမှန်း မသိရင် သင် အရေးတကြီး ခေါ်လို့ရမယ့် ဖုန်းနံပါတ်မျိုးကို ထည့်ထားပါ။ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ကိုယ်သွားမယ့် ဒေသရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေရှာပြီး ကိုယ့်အသိမိတ်ဆွေတွေရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေ နဲ့အတူ မှတ်ထားသင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်ဟာ ကျောင်း၊ ဒါမှမဟုတ် အလုပ်က အဖွဲ့နဲ့ အတူတူ သွားတာဆိုရင် သင် လိုအပ်ချိန်မှာ ဆက်သွယ်နိုင်မယ့် ဖုန်းနံပါတ်များကို မှတ်ထားသင့်ပါတယ်။
၄။ အဆက်အသွယ် မပြတ်ပါစေနဲ့။
မိသားစုဝင်တွေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အဆက်အသွယ် ပြတ်သွားတာက သင့်ကို ပိုခက်ခဲစေပါတယ်။ ဒါကို ဖြေရှင်းဖို့ နည်းကတော့ လွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့ပါပဲ။ ကျွနု်ပ်တို့နဲ့ အနီးစပ်ဆုံး ဖေ့ဘွတ်ခ် (facebook) တို့၊ စကိုက်ပီ (skype) တို့ ရှိပါတယ်။ Matador ဆိုတဲ့ website မှာ သင့်မိသားစုတွေ ဝင်ကြည့်နိုင်အောင် ဘလော့ဂ်ထောင်လို့ ရပါတယ်။ အပတ်စဉ် မေးလ်ပို့တာကလည်း ကောင်းတဲ့ နည်းတစ်ခုပါပဲ။
၅။ ထုပ်ပိုးပြင်ဆင်ဖို့ အချိန်များများပေးပြီး မေ့လောက်မယ့် ပစ္စည်းတွေကို သေချာထည့်ပါ။
ခရီးမထွက်ခင်နေ့ကျမှ ခြေအိတ် မထည့်ရသေးတာ သတိရတာမျိုး၊ အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေး မဝယ်ရသေးတာမျိုး၊ သင်ခရီးထွက်မယ် ဆိုတာကို အကြွေးဝယ်ကတ် လုပ်ထားတဲ့ဘဏ်ကို အကြောင်း မကြားရသေးတာမျိုးလောက် သောကများရတာ မရှိပါဘူး။ အနားယူပြီး သင်ခရီးမထွက်ခင် ရက်နည်းနည်း လိုသေးတဲ့ အချိန်မှာ စပြီး ထုပ်ပိုး ပြင်ဆင်ပါ။ ထုပ်ပိုးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သီးသန့်ရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ခရီးဆောင်အိတ် တခုတည်းမှာ လိုအပ်တာတွေ အားလုံးထည့်ဖို့ ဘယ်လို လုပ်ရမယ်ဆိုတာ ပြထားတဲ့ ၂ မိနစ်စာ ဗီဒီယိုတခုခု ရှာဖွေကြည့်သင့်ပါတယ်။
၆။ လေယာဉ်စီးဖို့ ကြောက်ခြင်း၊ ပျင်းနေခြင်း တို့အတွက် အစီအစဉ် ဆွဲထားပါ။
လူအများစု ခရီးသွားတဲ့အခါမှာ လေယာဉ်စီးရလေ့ ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ လေယာဉ်စီးတာဟာ သင့်ကို တုန်လှုပ် ခြောက်ခြားစေတယ် ဆိုရင် Fodor ဆိုတဲ့ ခရီးသွား website က သင့်ရဲ့ လေယာဉ်ကြောက်စိတ်ကို ဖြေရှင်းဖို့ အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေ ပေးနိုင်ပါတယ်။
၇။ သင်တယောက်တည်းလည်း လုပ်နိုင်ပါတယ် ဆိုတာ သတိရပါ။
ခရီးသွားတယ်ဆိုတာ ရှုပ်တတ်ပြီး စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်း မဖြစ်လာတာ များပါတယ်။ ခရီးသွားနေတုန်း ဖြစ်လာတဲ့ သင့် အခက်အခဲတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ လိုက်လျောညီထွေ နေနိုင်ဖို့ပဲ လိုတာပါ။ ခရီးသွားတဲ့ သူတယောက် အနေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ နေနိုင်တာထက် ကောင်းတဲ့အချက် မရှိပါဘူး။
Dependence Syndrome: Diazepam ဒိုင်ရာဇီပင်စွဲခြင်း...
သင် စိတ်ဖိစီးမှု များနေကြောင်း ပြသသည့် လက္ခဏာ ငါးမ...
သင်သတိမထားမိတဲ့ သင့် ဦးနှောက်ကို ပျက်စီးစေနိုင်သော...
ဘယ်တုန်းကမှ၊ ဘယ်သောခါမှ၊ ယခုလည်း
© 2019 Trust Oo M-health Enterprise.All Right Reserved.
Register Super Admin